South Africa considers financial options to help Zimbabwe revive economy
South Africa considers financial options to help Zimbabwe revive economy Featured
Written by Mar 15, 2019
South Africa’s President Cyril Ramaphosa and Zimbabwe’s president Emmerson Mnangagwa arrive for bilateral talks in Harare, Zimbabwe, on Tuesday (March 12 2019). Picture: Philimon Bulawayo/Reuters
President Cyril Ramaphosa said on Tuesday South Africa was ready to help Zimbabwe revive its economy, but within its means, while the two neighbours consider options that could see Harare receiving some financial assistance.
A dearth of US dollars in Zimbabwe has fanned shortages of fuel, drugs and food, choking an economy yet to recover from the disastrous rule of Robert Mugabe, who was removed in a coup in 2017.
South Africa said in January that it had turned down a request in December from its southern African neighbour for a $1.2 billion (about R17 billion) loan.
But in a joint communique issued after a meeting between Rampahosa and Zimbabwe’s president Emmerson Mnangagwa and officials, the two countries said they were looking at increasing a standing credit facility between central banks of the two nations.
Under the facility, Zimbabwe can access R100 million from South Africa’s central bank.
“Other financing options beyond this are also being explored, for example a facility from South African private banks to the Zimbabwean private sector and guaranteed by the South African government with an appropriate counter-guarantee from the Zimbabwean government,” the communique read.
Ramaphosa had earlier told the meeting that Zimbabwe, which also faces a severe drought this year, deserved support from the rest of the world to help reboot its economy.
He repeated his previous call for sanctions against Zimbabwe to be lifted.
Zimbabwe says US sanctions, which were extended by another year by President Donald Trump last week, throttle its ability to access funding from lenders like the International Monetary Fund and World Bank and raise its political risk profile.